﻿﻿ FPTAF - Firariana soa
"AMPY HO ANAO NY FAHASOAVAKO"
2 Kor. 12:9 a
Faly miarahaba anao tonga soa eto amin'ny tranonkalan'ny Fiangonana Protestanta Tranovato Ambohimalaza Firaisana. Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo !
Ny Herin'ny Tompo
Ampy ho anao ny Fahasoavako
Discernement du Christ
Grandeur du pardon
Ireo vy nahitana ny FPTAF
Izy telo lahy sady mpitandrina no mpivarotra
FVK - Fiarahabana tratry ny taona 2020
Fiarahabana Zokiolona 2021
Alahadin'ny Mpitandrina 2020
Fiofanana Loholona-Diakona 2020
Faha-10 taona Antso Fiderana
Bonne année Antso Fiderana
Voka-dehibe STA 2020
Zumba ankizy STA
Fijerena sarimihetsika STA
Fiarahabana Zokiolona 2020
Fanamasinana ho Mpandray manokana
Fandraisana Mpanatona 2019-2020
Krismasy STA 2019
Fankalazana Mariazy 50 taona noho miakatra
Fankalazana Mariazy 41-49 taona
Faha-5 taona niarahana niasa tamin'ny Mpitandrina
Fiofanan'ny Loholona sy Diakona Oktobra 2019
Fankalazana Mariazy 21-40 taona
Tafika masina 2019
Fankalazana Mariazy 1-20 taona
Fanamafisana Diakona 28 Aprily 2019
Fiofanana STA 10 Martsa 2019
Fitokanana Akany 24 Febroary 2019
Pasteur RATEFY Tolotra, Grand Croix de 2ème classe
Alahadin'ny Mpitandrina 2017
FVK : Fiarahabana tratry ny taona 2017
Fiarahabana ireo Zoky Olona 2017
Fiofanana mpampianatra STA
Batisa sy Fanasan'ny Tompo
Asan'ny Fikambanana sy ny Vaomiera
Jaona 14:27 “Fiadanana no avelako ho anareo, ny fiadanako no omeko anareo; tsy tahaka ny fanomen'izao tontolo izao no fanomeko anareo. Aza malahelo na matahotra ny fonareo”
Betsaka samy hafa ny teny firarian-tsoa hita ao amin'ny Soratra Masina. Hianatra roa aman-telo amin'izany isika.
Finaritra :- Fiarahabana io. Jesoa Kristy koa nampiasa an'io rehefa nitsangana tamin'ny maty Izy ka niarahaba an'i Maria. Fiarahabana misy fihetseham-po io, sady misy filaliana! Mitovy hevitra amin'ny hoe "fiadanana", satria ny teny hebreo hoe "shalom" no nadika hoe "finaritra" sady nadika hoe koa: "fiadanana" ao amin'ny Baiboly Malagasy! Noho izy io teny fiarahaban'ny olona avy nandresy, no azo andikana azy amin'ny fiarahabana malagasy rehetra: oh. "tsara ihany va ianao tompoko!" na "salama!" na "manao ahoana ianao tompoko?" na "akory aby!"...... Tonga tsy miarahaba, naman'ny sosotra; lasa tsy manao veloma, naman'ny tezitra!
Fiadanana :- Sady mety hatao fiarahabana, nefa ampiasaina matetika amin'ny fanaovam-beloma io. Rehefa handao ny mpianatra ny Tompo fa ho any an-danitra no nampiasa matetika io "fiadanana" io. Mitovy hevitra amin'ny "finaritra" izy io, satria teny "shalom" = fiadanana! Misy hevitra efatra fonosin'izany:-
1°)-Vita fihavanana amin'Andriamanitra, ka miadana!
2°)-Vita fihavanana amin'ny namana, ka miadana!
3°)-Salama saina, vatana, fanahy, ka miadana!
4°)-Famatsiana = afaka mamokatra fambolena, fiompiana, taozavatra, ka miadana!
Isika ato amin'ny Tranovato fptaf no faly mampiasa io teny io aorian'ny Fandraisana ho firariana soa sy fanaovana veloma mandra-pihaona indray!
Fahasoavana :-Fanomezana avy amin'Andriamanitra ho an'ny olona tsy mendrika ny "Fahasoavana". Izany no maha-famantarana hita maso momba ny Fahasoavan'Andriamanitra ny Batisa sy ny Fanasan'ny Tompo! Fa fanomezana ho an'ny olona mendrika kosa ny "valisoa".
Misy ambaratonga dimy àry ny fahasoavana atolotry ny Tompo ho anao, ka manao lanja miakatra hatrany:-
a)-Mahita fitia eo imason'Andriamanitra ianao (Jao.3)
b)-Tahian'Andriamanitra ianao ka tsofiny rano.
d)-Ambinina ianao, mahomby amin'izay atao rehetra.
e)-Vatsian'Andriamanitra ianao fa manan-karena Izy.
f)-Omeny voninahitra ianao! ka lasa tena zanany !
Samia mandini-tena, hatraiza ny fahasoavana efa voarainao ( a sa b sa d sa efa lasa ambony kokoa?)
Jaona 1:16 Fa tamin'ny fahafenony no nandraisantsika fahasoavana anampy fahasoavana!
Vavaka :-Firariana soa koa ny vavaka amin'ny lafiny ilany. Samia mifampivavaka isika rehetra, mangataka ny soa ho an'ny namana sy izay heverinao ho ny fahavalo aza.
Mizara dimy ny vavaka:-
1°)-Fiantsoana: antsoina amin'ny anarany Andriamanitra Ray (Jehovah), Zanaka (Jesoa Kristy), Fanahy Masina.
2°)-Fanatonana: ny fahotana no efitra mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, ka mila mibebaka sy mifona Aminy isika!
3°)-Fangatahana amin'ny finoana izay irianao.
4°)-Fisaorana sy fiderana Azy.
5°)-Famaranana amin'ny Anaran'i Jesoa Kristy Tompo! Sady azo amafisina amin'ny teny hoe: "Amena!" Marina!
"Ho aminao anie ny fiadanan'ny Tompo!
Ny Mpitandrina RAKOTOSON Philippe
FPTAF, III L 50 Soanierana Ambohimalaza Miray, Antananarivo 103
Laharana: 00 (261) 34 72 719 33
00 (261) 33 16 165 67
Copyright © 2016 FPTAF Ambohimalaza. Novokarin'ny FPTAF. Mpanohana: Taranak'Ambohimalaza.